Fomba telo natoraly fampidinana ny hafanana raha manavy • Madagossip
il y a 1 année 5.5 K
Raha miakatra ny hafanana
Mety hiakatra tampoka ny mari-panan’ny vatana, indrindra amin’ny ankizy. Miady amin’ny otrikaretina izay mitady hamely azy ny vatana amin’ireny fotoana ireny.
Rehefa miparitaka ny otrikaretina dia fomba roa no entin’ny vatana miatrika izany : ampiakariny ny hafanana eo amin’ny faritra misy ny otrikaretina, ary ampiakariny koa ny hafanana manerana ny vatana rehetra : io ilay hoe « tazo ». Tandremo fa tsy tazo mahery no resaka eto !
Raha vao mihoatra ny 38.5°C kosa anefa dia mampanahy, satria efa diso miakatra loatra izany ka mety tsy ho zakan’ny vatana intsony.
Ireto kosa misy fomba natoraly hampidinana izany :
Vontosana amin’ny vinaingitra kely ny bà kiraro roa vita amin’ny hasy (100% coton) ary ampitafiana ny tongotra. Asiana bà hafa somary makakakaka (tricot) eo amboniny. Hitroka ny hafanana ilay vinaingitra ary hampidina ny fanaviana.
Fampiasana ovy manta
Kikisana ny ovy 1 na 2 rahefa avy nosasana tsara. Tsy voasana fa kikisana miaraka amin’ny hodiny. Io no apetraka eo amin’ny faladian-tongotra dia fonosina bà kiraro. Mihamahazo aina rehefa miasa ireo ovy. Ny ovy no hitroka ny hafanana diso tafahoatra.
Fampiasana tongolo oignon
Sasana tsara ny tongolo iray dia voasana. Tetehina fisapisaka boribory. Apetaka eo ambany faladia hatrany dia asiana bà kiraro. Hitroka ny otrikaretina ny tongolo. Ka izany no hampidina ny fanaviana sy hampahazo aina ny vatana.
Raha misy olona na ankizy miakatra hafanana ao an-trano dia atao maivana kokoa ny akanjony. Tsy mety anefa raha mampangorintsina azy satria midika izany fa mangatsiaka izy ka mety vao maika hampiakatra ny hafanany izany, na mety hifanintona.
Apetraka ao amin’ny efitra mangatsiatsiaka amin’ny antonony ilay marary. Sokafana ny varavarankely amin’izany.
Ampisotroy rano, na ranom-boankazo feno vitamine C ny olona miakatra hafanana, mba ho ampy rano sy hanamafy ny hery fiarovany.
Azo asiana lamba nolemana tamin’ny rano mangatsiaka ny handrina.
Azo atao ihany koa ny mampandro ny zaza. Tandremo anefa tsy hampiasa rano mangatsiaka fa rano matimaty hatrany no ampiasaina vao ahena moramora.
Lamba na compresse mangatsika atao amin’ny handrina
Raha tsy mety midina ny hafanana mandritra ny andro misesy, na misy tranga hafa mampiahiahy dia aza misalasala manatona dokotera na tobim-pahasalamana.
Vakio koa : Fomba fiarovana amin’ny gripa
Tagsfièvre grippe hafanana température